Lisitry ny fanamarinana: Ahoana ny fomba hamoronana atiny izay misy | Martech Zone
Alarobia, Jolay 15, 2020 Alarobia, Jolay 15, 2020 Douglas Karr
Rehefa mifantoka amin'ny votoaty izay mahasarika mpijery ny mpivarotra dia matetika isika no mahita fa manangana sy mamolavola fanentanana miaraka amina vondron'olona vitsivitsy mitovy amintsika. Na dia eo am-piezahana hanana ny maha-izy azy sy ny fifamatorana aza ny mpivarotra, dia matetika no tsy jerena matetika loatra ny fahamaroana amin'ny fandefasantsika hafatra. Ary, amin'ny fijerena ny kolontsaina, ny lahy sy ny vavy, ny firaisana ara-nofo, ary ny kilema… no tiana holazaina amin'ny hafatray anjara afaka raha ny marina manilikilika ny olona tsy mitovy amintsika.
Ny fampidirana dia tokony ho laharam-pahamehana amin'ny hafatra marketing rehetra. Mampalahelo fa ny indostrian'ny fampitam-baovao dia mbola tsy hita soritra:
Ny vehivavy dia 51% amin'ny mponina fa 40% fotsiny no mitarika.
Ny olona manana kolontsaina marobe dia 39% amin'ny mponina fa ny 22% fotsiny no mitarika.
20% ny Amerikanina taona 18-34 dia manondro ny LBGTQ fa ny 9% amin'ny mahazatra ihany no mandrafitra azy.
13% ny Amerikanina no manana kilema nefa ny 2% amin'ny mahazatra ihany no manana kilema.
Amin'ny fifantohana amin'ny inclusivity, ny media dia afaka manampy amin'ny fanoherana ny stereotypes ary manampy amin'ny fampihenana ny fitongilanana tsy mahatsiaro tena.
fitoviana - mikendry ny hampiroborobo ny rariny nefa tsy mandeha ihany izany raha toa ka manomboka amin'ny toerana iray ny tsirairay ary mila fanampiana mitovy.
ny hitsiny - dia manome ny olona rehetra izay ilainy mba hahombiazany, fa ny fitoviana kosa dia mitovy amin'ny fomba itondran'ny tsirairay ny tsirairay.
Fifandraisana iraisam-pirenena - ny toetra mifandraika amin'ny sokajy sosialy toy ny firazanana, ny saranga ary ny lahy sy ny vavy rehefa mihatra amin'ny olona iray na vondrona iray izy ireo, heverina ho toy ny famoronana rafitra mifanila sy mifampiankina amin'ny fanavakavahana na fatiantoka.
Tokenisma - ny fanao tsy manao afa-tsy ezaka an'ohatra mba hananana olona tsy dia misy solontena, indrindra amin'ny fanangonana olona vitsivitsy tsy dia manana solontena mba hitazomana ny fisian'ny fitoviana.
Tsy mitombina - fihetsika na stereotypes izay misy fiatraikany amin'ny fahatakarantsika, ny asantsika ary ny fanapahan-kevitsika amin'ny fomba tsy mahatsiaro tena.
izany infographic avy amin'ny Youtube manome lisitra feno amin'ny antsipiriany izay azonao ampiasaina amin'ny ekipa mpamorona rehetra mba hahazoana antoka fa ny fampidirana dia mpamily amin'ny drafitra, fanatanterahana ary ny mpihaino kendrena ny atiny noforoninao. Ity misy ambany-ambany ny lisitra… izay novaiko ho ampiasaina amin'ny fikambanana misy atiny… tsy ny video fotsiny:
Votoatiny: Inona avy ireo lohahevitra voarakitra ary fomba fijery inona no tafiditra ao?
Ho an'ireo tetik'asa atiny misy ahy ankehitriny, efa nitady fomba fijery samihafa ve ianao, indrindra ireo izay tsy mitovy amin'ny anao?
Moa ve ny votoatinao miasa mba hamahana na hanesorana ireo stereotype momba ireo vondrona voahilikilika ary hanampy ny mpanatrika hijerena ny hafa amin'ny fahasarotana sy fiaraha-miory?
Moa ve manome ny fomba fijery sy kolontsaina marobe ny atiny (indrindra ny vaovao, tantara, sy ny siansa)?
Fampisehoana amin'ny takelaka: Inona no hitan'ny olona rehefa mitsidika ahy izy ireo?
Misy fahasamihafana ve ao amin'ny atiny? Moa ve ny manampahaizana sy mpitarika eritreritra avy amina fiaviana maro samy hafa miaraka amin'ny refy maha-izy azy (lahy sy vavy, firazanana, foko, fahaizana sns ..) aseho amin'ny atiny?
Ao anatin'ireo atiny 10 farany nataoko, misy ve ny fahasamihafana eo amin'ireo feo izay soloina solontena?
Raha mampiasa sary mihetsika na sary an-tsary aho, misy karazana tononkira, firafitry ny volo ary ireo miralenta ve?
Misy fahasamihafana eo amin'ireo feo mitantara ny atiny ve?
Fifandraisana: Ahoana no hataoko amin'ny fanohanana sy famoronana mpamorona hafa?
Ho an'ny fiaraha-miasa sy tetikasa vaovao, mijery fantsom-pifidianana kandidà maro isan-karazany ve aho, ary nojerena ve ny fifanelanelanana?
Manararaotra mampiasa ny sehatra misy ahy ve aho mba hanandratako sy hanohanana ireo mpamorona avy amin'ny fiaviana tsy dia nisy solony?
Mampianatra ny tenako momba ny fomba fijery voahilikilika ve aho amin'ny alàlan'ny fanaovana fiaraha-monina / votoaty maro karazana?
Ahoana ny fiasan'ny orinasako mamboly feo isan-karazany sy manome hery ireo mpampita hevitra / mpanafika?
Ahoana no hialan'ny fikambanana misy ahy? Moa ve isika mampifandray ireo manam-pahaizana sy mpampita hafatra avy amin'ny fiaviana tsy nisy solontena mba hahazoana fotoana mihoatra ny atiny mifandraika amin'ny fahasamihafana?
Ahoana ny fomba hanehoan'ny teti-bola sy ny fampiasam-bola ny fanoloran-tena amin'ny fahasamihafana sy ny fampidirina?
Mpihaino: Ahoana ny fomba fieritreretako ny mpijery rehefa manao atiny?
Iza ny mpanatrika kendrena? Efa nieritreritra ny hanamboatra ny atiny ve aho mba hitady sy hanao mpihaino marobe?
Raha misy atiny misy lohahevitra misy fitongilanana ara-kolontsaina amin'ireo vondrona sasany, moa ve aho manome konteks izay afaka mandray ireo mpihaino marobe?
Rehefa manao fikarohana ataon'ny mpampiasa, miantoka ny fomba fijery isan-karazany sy ampidirina ao ve ny andrim-panjakana?
Mpamorona atiny: Iza no ao amin'ny ekipako?
Misy fahasamihafana ve eo amin'ireo ekipa miasa amin'ny atiny?
Hita taratra amin'ny demografikan'ny ekipako ve ny sarambabem-bahoaka fa tsy ny mpijery ankehitriny fotsiny?
Manam-pahaizana manokana ve aho ary mpitarika mieritreritra avy amin'ny fiaviana samihafa amin'ny lafiny marimaritra iraisana (miralenta, foko na foko, fahaizana sns ...) ho mpanolo-tsaina amin'ny tetikasako?
Tags: fahasamihafanastatistikan'ny fahasamihafanafitovianany hitsinyfampidiranainclusivitystatistikan'ny inclusivitySary torohayintersectionalityfitsaratsaram-poanatokenismafitongilanana tsy mahatsiaro tena